Waamicha Barattoota Oromoo Maraaf « QEERROO
Waamicha Barattoota Oromoo Maraaf
October 26, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	2 Comments
Waamicha Barattoota Oromoo Maraaf “Qaamni Waliif Hindhiigne Qeensaa Xurii baatu Qofa” Qeerroo Bilisummaa Mooraa Jimmaa Yuunibarsiitii Baratan Irraa Onkolo. 25,2017 Nuti barattoonni Oromoo, rakkoof miidhaa hawwaasa keenya irra gahu irra qolannee rakkoo uummata Oromoo mara baadhachuuf muratoodha. Saamicha biyya keenya Oromiyaatti karaa mootummaa Wayyaanee raawwatamu kamuu dura dhaabbachuun falma mirgaa gadjabeessinee itti fufuuf ayyama eenyuu kan hingaafanne yoo ta’u, qaama rakkoo uummata dursee argu akka taane waliif ibsaa rakkoowwan uummata irra gahaa jiran baraaruu qabna. Sirna federaalizimii jalatti utuu buluu hinjalqabin irraa qabee, hanga ammaatti itti miidhamaas jira. Yakkoota mootummaa TPLF ykn Wayyaanee kana teenyee ilaaluuf obsa kan hinqabne ta’uu keenya yoo mirkaneessinu, wall qabnee waliif dirmannee mootummaa garboonfataa biyyaa baasuuf sochii jalqabne haa jabeessinu Jenna. Mootummaan sirna bulchiinsa Federaalizimii jala gugachuun nu nyaataa ture ammas itti fufee kan nu nyaataa jiru yoo ta’uu, uummata keenya ardaaf qabeenyaasaa irraa addaan baasee aadaa keenya bittimsee, maatii Oromoo beelaaf kalaalee jira. Kana irra darbee Barattoota Oromoo mooraa barnoota olaanoo Jijjigaa Yuunibarsiitii jiraniif uummata Oromoo Naannoo Sumaalee keessaa kumoota danuun kan lakkaahaman buqqaasee jira.Barsiisota mooraa Jijjigaa jiraataniifis akeekachiisni du’aa laatamaa wayita jirutti, humnoota nu ajjeesaa nu hidhaa yoona gahaniif garaa dhiifamaa kan hinqabne ta’uu mirkaneessinu, barnoota hanga barattoonni Oromoo ramaddii argatanitti dhaabuu akka qabnu walii dhaamuu feena. Dabalataan yakka Waraanaa uummata keenya irratti baname jiru keessattuu yakkoota Ambo magaalaa Gudar keessatti akkasuma Danbii Doolloo magaalaa Qaaqee keessatti oladeemtota ilmaan Oromoo irra gahe nii balaaleffanna. Yakka haala kanaan deemu akka nurraa dhaabuu qaban, nii gaafanna. Waraana labsanii Oromoo fixaa afaaniin Nageenya jechuun haqa dubbii miti. Yakkamtoonni seera jala hanga hinoolletti barnootatti deebii’uu akka hinqabne wal hubachiisna. Agartuun Oromoo barattoota Mooraa Yuunibarsiitii dhaabbilee barnootaa biyyattii ta’uu hubachuun gaaffii keenya qixa roga qabeessaan gaafachuu itti haa fufnu. Mootummaa Ce’umsaa nageenya biyyattii eegsisu akka nuu dhaabatu gaaffii walitti fufiinsaa haa goonu! Waliif haa awwaannu waliif haa birmannu. Humna afaan qawween nutti duule jalaa karooraa haa fashalsinu. Haaluma kanaan barattoonni ammallee barnootarra jirtan maqaa keenya akka hinnyaanne , nu faana dhaabbadhaa uummata keenyaaf falmaa isiniin jenna.
Yuunibarsiitii Jimmaa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Onkoloo. 25,2017
« ONN;Oduu Olmaa Oromiyaa Onk 25/2017
Gootota Qeerroo Amboo »
Pingback: Waamicha Barattoota Oromoo Maraaf – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATAA
Yoo tooftadhan hin sochoone ta’e du’u keessan beeka!!